သတင်း - SWITCH ထိန်းချုပ်ကိရိယာ
၎င်းသည် 3-အဆင့် TURBO လုပ်ဆောင်ချက်၊ ချိန်ညှိနိုင်သော တုန်ခါမှု4အဆင့်၊ ဝင်ရိုးခြောက်ခု လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှု၊ ခလုတ်တစ်ချက်နှိုးဆွခြင်းနှင့် မြေပုံဆွဲခလုတ်များပါရှိသော NINTENDO SWITCH/SWITCH LITE အတွက် ကြိုးမဲ့ SWITCH PRO ထိန်းချုပ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
1. [ဒီဇိုင်းအသစ် Switch Controller]- ဤခလုတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာသည် Nintendo Switch နှင့် Switch Lite အတွက်သင့်လျော်သည်။အထူးရုပ်ပုံဒီဇိုင်းအပြင် Turbo လုပ်ဆောင်ချက်၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်တုန်ခါမှုလုပ်ဆောင်ချက်၊ multi-gyro sensor၊ one-key wake-up၊ mapping key၊ screenshot function နှင့် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်များပါရှိသည်။အသုံးပြုရအလွန်လွယ်ကူပြီး ဂိမ်းကြိုက်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
2. [ချိန်ညှိနိုင်သော တာဘိုလုပ်ဆောင်ချက်]- တာဘိုလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်၊ အလိုအလျောက်နှင့် တစ်ပိုင်းအလိုအလျောက် ရိုက်ကူးမှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။Controller ၏ အလိုအလျောက် စက်နှိုးခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကို တစ်စက္ကန့်လျှင် 5/12/20 ကြိမ်နှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ခလုတ်ကို အချိန်အကြာကြီး ပြန်လုပ်ရင် ပင်ပန်းသလို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။အမြန်ရိုက်ချက်လုပ်ဆောင်ချက်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ရိုးရှင်းသောခလုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များမှ လွတ်မြောက်နိုင်ပြီး ထပ်ခါထပ်ခါ ခလုတ်များ၏ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို လျှော့ချနိုင်သည်။
3. [six-axis gyroscope & multi-vibration]- gyroscope sensor ၏ လည်ပတ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များကို ပိုမိုတိကျစေရန်အတွက် ဝင်ရိုးခြောက်ခုပါရှိသည့် gyroscope တပ်ဆင်ထားသည်။၎င်းတွင် ကြိမ်နှုန်းမြင့်တုန်ခါမှုလုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိပြီး တုန်ခါမှုပြင်းထန်မှုကို ဂိမ်းအမျိုးအစားအလိုက် သင့်လျော်သောတုန်ခါမှုပြင်းထန်မှု သို့မဟုတ် သင်နှစ်သက်သောတုန်ခါမှုပြင်းထန်မှုအား ဂိမ်းအမျိုးအစားအလိုက် ချိန်ညှိနိုင်သည် (မရှိ/အားနည်း/စံ/မီ/ပြင်းထန်) အဆင့်4ဆင့်ဖြင့် ချိန်ညှိနိုင်သည်။ .သင့်စိတ်ကြိုက်ဆက်တင်များမှ ယူဆောင်လာသည့် ဂိမ်းအတွေ့အကြုံကို ခံစားလိုက်ပါ။
4. [ကြီးမားသော စွမ်းရည်ရှိသော ဘက်ထရီနှင့် ရေရှည်အသုံးပြုမှု]- 550mAh ဘက်ထရီကို တပ်ဆင်ထားပြီး၊ ၎င်းကို ၂ နာရီခန့်အတွင်း အားအပြည့်သွင်းနိုင်ပြီး ဂိမ်းကစားချိန် ၁၀ နာရီမှ ၁၅ နာရီခန့်အထိ အဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် သင့်အား အနှောင့်အယှက်မရှိ ဂိမ်းကစားချိန်ကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။သင့်အား ပို့ဆောင်ရန် ဘက်ထရီ နည်းပါးသော သတိပေးချက် လုပ်ဆောင်ချက် ပါရှိသည်။
5. [သက်တောင့်သက်သာရှိသော ဒီဇိုင်းနှင့် အရွယ်အစား] အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော ချုပ်ကိုင်မှုပုံစံ၊ ရှိုက်နေသော Joystick၊ Matte Slip- Non-Slip ပစ္စည်းများသည် လက်နှင့် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ပြီး လက်ချောင်းဖိအားကို လျှော့ချပေးပြီး ချွေးထွက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။160g လောက်လေးတော့ အရမ်းပေါ့ပါးတဲ့အတွက် အကြာကြီးကိုင်ထားရင် ပင်ပန်းမှာမဟုတ်ဘူး။